नेपालको संविधानसम्बन्धी जानकारी (भाग १) - निष्पक्षखबर
नेपालको संविधानसम्बन्धी जानकारी (भाग १)
 नेपालको संविधान भन्नाले के बुझिन्छ ?
– देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राज्यको आधारपत्र नै संविधान हो ।
– संविधानलाई राजनीतिक सहमतिको कानुनी दस्तावेजको रूपमा रहेको देशको मूल कानुन तथा कानुनको पनि जननी (Mother of Law) पनि भनिन्छ ।
– संविधान लिखित तथा अलिखित दुवै रूपमा पाउन सकिन्छ ।
– संविधानले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्यायपालिका एवम् विभिन्न संवैधानिक निकायको संरचना तयार गर्ने गर्दछ ।
– संविधानसँग बाझिएको कानुन अदालतबाट अमान्य वा बदर हुन्छन् ।
 नेपालमा हालसम्मका संविधानहरू
१) नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४
– ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची ।
– २०७२ साल असोज ३ गते आइतबारबाट प्रारम्भ भएको ।
– पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते (धारा ४२, र धारा २८६)
– संविधान सभावाट संविधान बनाउने नेपाल ४४ औं राष्ट्र हो ।
 नेपालको संविधानका विशेषताहरू
– संविधान सभाबाट पारित गरी जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान ।
– नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
– नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको ।
– सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य प्रतिबद्धता प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको ।
– ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको ।
– नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा रहेको ।
– आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको ।
– पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
– दलित र ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको ।
– राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको ।
– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था रहेको ।
– प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरिएको । जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
– प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको ।
– एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको ।
– नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको ।
– सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था गरिएको ।
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई पहिलोपटक संवैधानिक निकायको रूपमा उल्लेख गरिएको ।
– राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतको निर्णयबाट जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।
– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको ।
– संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्ति हुने पदमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको ।
– प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वीकार गरिएको ।
– नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको ।
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको ।
 नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
 मौलिक हक
– राज्यको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख भएको र उल्लङ्घन भएमा उपचारको व्यवस्था पनि संविधानमा नै व्यवस्था हुने अधिकार मौलिक अधिकार हो ।
– मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकारहरूमध्ये संविधानले नै तोकिदिएको अधिकार मौलिक अधिकार हो ।
– मौलिक अधिकारसँग बाझिने कानुन Judicial Review द्वारा अदालतबाट बदर हुनेछ ।
– राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार मौलिक हक हो ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरू ( धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ४१ वटा)
धारा १६ ः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
धारा १७ ः स्वतन्त्रताको हक
धारा १८ ः समानताको हक
धारा १९ ः सञ्चारको हक
धारा २० ः न्यायसम्बन्धी हक
धारा २१ ः अपराधपीडितको हक
धारा २२ ः यातनाविरुद्धको हक
धारा २३ ः निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
धारा २४ ः छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
धारा २५ ः सम्पत्तिको हक
धारा २६ ः धार्मिक स्वतन्त्रताको हक
धारा २७ ः सूचनाको हक
धारा २८ ः गोपनीयताको हक
धारा २९ ः शोषण विरुद्धको हक
धारा ३० ः स्वच्छ वातावरणको हक
धारा ३१ ः शिक्षासम्बन्धी हक
धारा ३२ ः भाषा तथा संस्कृतिको हक
धारा ३३ ः रोजगारीको हक
धारा ३४ ः श्रमको हक
धारा ३५ ः स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
धारा ३६ ः खाद्यसम्बन्धी हक
धारा ३७ ः आवासको हक
धारा ३८ ः महिलाको हक
धारा ३९ ः बालबालिकाको हक
धारा ४० ः दलितको हक
धारा ४१ ः ज्येष्ठ नागरिकको हक
धारा ४२ ः सामाजिक न्यायको हक
धारा ४३ ः सामाजिक सुरक्षाको हक
धारा ४४ ः उपभोक्ताको हक
धारा ४५ ः देश निकाला विरुद्धको हक
धारा ४६ ः संवैधानिक उपचारको हक
 नागरिकका कर्तव्य
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४६ अनुसार प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
१) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
२) संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
३) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
४) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
 नेपालको संविधान अनुसार दलितका हकहरू उल्लेख गर्नुहोस् ?
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । दलितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा पहिलो पटक यो संविधानमा उल्लेख गरिएको हो । जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने ।
– सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने ।
– प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने ।
– राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने ।
– राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने ।
– राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
– दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण हुने ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सार्क सदस्य राष्ट्र मिलेर अघि बढ्ने : ओली
यस्तो छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत महसुल दर